ငါ့ကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုလက်ခံစေတဲ့စမ်းသပ်မှုကဒီနေ့ကလေးများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယောက်ျားဟောင်းများရဲ့မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ Martin Daubney - Your Brain On Porn
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က: ဦးနှောက် Scan ဖတ်စွဲနှင့်ကိုက်ညီသက်သေအထောက်အထားကိုရှာဖွေ
ယောက်ျားဟောင်းများ၏ mag အယ်ဒီတာ Martin Daubney အားဖြင့်ဖြစ်သည်, 25 စက်တင်ဘာလ 2013
ငါ့ရှေ့မှာအ 20-13 အသက် 14 ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏အုပ်စုတစုတည်း။ အဓိကအားဖြင့်အဖြူရောင်, လူတန်းစားကလေးများအလုပ်လုပ်, သူတို့ကကောင်းစွာလှည့်ထွက်ခဲ့ကြသည်, ယဉ်ကျေး, giggly နှင့်ရှက်တတ်။
Porn On The Brain အမည်ရှိ Channel4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုလာမည့်တနင်္လာနေ့ည ၁၀ နာရီတွင်ထုတ်လွှင့်သည့်အနေဖြင့်လိင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ Jonny Hunt ဦး ဆောင်သည့်လိင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကျောင်းတွင်ထိုင်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအပါအ ၀ င်ဤကလေးများသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသည့်အရာကိုသိရှိရန်မည်မျှပင်ပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့သိသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများကို AZ စာရင်းပြုစုရန်ကလေးများကိုသူတောင်းဆိုခဲ့သည်။
မိန်းကလေးအချို့သည်လုပ်-Up သို့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး forays စတင်ခဲ့ကြသည်။ အများအပြားကသူတို့သွားအပေါ်မသန်စွမ်းပဲဝတ်ဆင်။ လူတိုင်းပေါ် မူတည်. ကျောင်းဝတ်စုံထွက်လှည့်နှင့်အခန်းများတွင်အများဆုံး Anti-အခွင့်အာဏာကြေညာချက်တမင်တကာအတိုဝတ်ဆင်တဲ့လည်စည်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးက One Direction အဖွဲ့ခဲတံအမှုတစ်စားပွဲခုံပေါ်တွင်လဲလျောင်း။ ဤရွေ့ကား, ကောင်းသောနေအိမ်များမှ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းသောကလေးငယ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့ဝေး, ဒါသိပ်ကိုသာမန်။
Jonny ကသူတို့စာရင်းကိုဘုတ်ပေါ်၌တင်လိုက်သောအခါ၊ ကလေးများသည်ညစ်ညမ်းသောစကားအသုံးအနှုန်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိထားခြင်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာမဟုတ်ဘဲအခန်းတွင်းရှိအရွယ်ရောက်သူတိုင်း - လိင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
'Nugget၊ အဲဒါဘာလဲ' Jonny မေးတယ်။
'နီဂတ်တ်သည်လက်များနှင့်ခြေထောက်များမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သည်' ဟုလူငယ်တစ် ဦး ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
တက်ရောက်သူအတွက်လူကြီးများ porn ဒီလိုမျိုးတည်ရှိပေမယ့်တစ်ဦး 14 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်တကယ်ကစောင့်ကြည့်ကြစေခြင်းငှါခဲ့ဘူးမသာသောအတွေးမှာအသင်းမကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ပို၍ သာမန်အဖြေများသည်ထိတ်လန့်စရာပင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အုပ်စုထဲမှယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအားလုံး၏စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောပထမဆုံးစကားလုံးမှာ 'စအို' ဖြစ်သည်။
မေးခွန်းမေးသောအခါ၊ သူတို့အားလုံးအသက် ၂၀ အရွယ်ရှိကလေးများအားလုံး - ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာဒီအကြောင်းကိုတောင်မှမသိခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်မကြားဖူးခဲ့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒါကိုကြည့်ပြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြိုးစားကြည့်ချင်ခဲ့တာပဲ။
၁၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး က 'ယောက်ျားတွေကယောက်ျားလေးတွေဟာလိင်မှုကိစ္စကိုလက်တွေ့ဘဝမှာမျှော်လင့်တယ်' ဟုပြောခဲ့သည်။ ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတစ် ဦး - ထောက်ခံမှုရလိုတဲ့သံစုံတီးဝိုင်းကို - သူကဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ကိုရွံရှာတာကိုပြောတယ်၊
တစ်နာရီကြာသောအတန်းနှင့်အခြားကလေးများနှင့်အတူလိုက်လာသည့်အခြားသုံး ဦး ၏အဆုံး၌ကျွန်ုပ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်လိင်ကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများသည်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းဟုအများကယူဆကြသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအပေါ်လုံးဝပုံပျက်နေခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကစားကွင်း၌ငါ 14-15 သူတို့မျက်မြင်ဖူးအွန်လိုင်းဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်မှအသက်ခုနစ်ခုတောက်ပယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများတစ်သတ္တိအုပ်စုတစ်စုမေးမြန်းထားသည်။
'မင်းကအသဲကွဲနေတာလား? ကျွန်တော်မေးသည်။ ဒါကတရားမဝင်ဘူး ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ကရတာလဲ '
'Facebook၊ 'သင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုသည်မှာပေါ်လာတတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်။ မင်းဒါကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူး 'ဆိုပြီးပြောတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က 'ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာမင်းလှဲချလိုက်ရုံပဲ။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကအဲ့ဒါကြိုက်ရင်မင်းရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ '
ဒီကလေးတွေဟာမျှတမှုရှိ၊ သူတို့သည်ကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအရှိဆုံးနှင့်အားကစားများဖြစ်သည်။ သူတို့ကသာမန်၊ ၎င်းသည် Broken Britain မဟုတ်ပါ။
၁၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်က 'ငါကညစ်ပတ်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်' လို့ပြောတယ်။ '' ငါကဒါကိုမကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ သူတို့ဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းအောင်အချင်းချင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုအီးမေးလ်ပို့တယ်။ '
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကခေါင်းကိုကိုင်ပြီး 'ဒါဟာတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုကြီးမားလှတယ်' တဲ့။
ကလေးများသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရရှိနိုင်ကြောင်းမိဘများသိရခြင်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာငွေကြေးဖြစ်သည့် Facebook မှ၎င်းတို့ရရှိနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားခြင်းကသူတို့၏နှလုံးသားကိုထိတ်လန့်စေလိမ့်မည်။
ဆွဲတင်ပြီး Martini ထွက်ခွာပြီးနောက်သူတို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ porn ပေါ်သို့မျိုးဆက်တစ်ဆက် switched ကြစေခြင်းငှါ agonized
ဆယ်ကျော်သက်များကိုကျွန်ုပ်ဤသို့မေးခဲ့သည် - 'အရွယ် ၁၀ တန်းမှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်အွန်လိုင်းပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်ဟုသင်မည်မျှထင်မြင်နိုင်မည်နည်း။ '
ငါအမြိုးသားအမေးတဲ့အခါအင်တာနက်ပေါ်မှာမိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုအိမ်မှာရှိကြ၏လျှင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သူမျှမကပြောပါတယ်, သူတို့ရဲ့မိဘများကသူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မိဘများကိုသူတို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသောအရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့, သူတို့သိကျွမ်းခဲ့ကြပါလျှင်တုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တီဗီရှိုးပြန်တမ်း 80-12 အသက် 16 ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးခဲ့သည်။
စစ်တမ်းအရယောက်ျားလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ အလွန်ပျော်ကြပြီးမိန်းကလေးများကြည့်ခြင်းထက်နှစ်ဆပိုများသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းမိန်းကလေးများသည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကြောင့်ပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ သူတို့မြင်လေလေ၊
ဒါကြောင့်ပင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကို blighting, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိကောင်းသောအရည်အချင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ get ရနိုင်မလား?
သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်၊ ၂၀၀၃-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ငါလူကလေးရဲ့မဂ္ဂဇင်းကိုတင်ခဲ့သည်။
မကြာခဏဗလာကျင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ပုံပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူငါရှည်လျားသောညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်စွပ်စွဲခံရပြီး, Loaded ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်, ငါ့မဂ္ဂဇင်းကိုပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုသို့မျိုးဆက်တစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၌ငါဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ခရီးထွက် set: porn အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကထိခိုက်ဘဝတွေကိုလဲ?
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လှပသောကလေးငယ်ဆန်နီသည်ယခုလေးနှစ်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုမှာလည်းနက်ရှိုင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်သည်။ သူသည်မူလတန်းကျောင်းကိုစဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်းကလေးများကော်မရှင်နာသည်ယောက်ျားလေးများသည်အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်ယခုအခါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့နေရကြောင်းခန့်မှန်း
ငါကညစ်ညမ်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလိုပဲညစ်ညမ်းတဲ့အင်အားဟာအဖျက်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာမကြာသေးခင်ကမှစွပ်စွဲခံရပြီးဒါရိုက်တာဒေးဗစ်ကင်မရွန်က 'ကလေးဘ ၀ ပျက်ယွင်းနေတယ်' လို့ပြောတယ်။ အရင်တုန်းကတက္ကသိုလ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တီဗွီနဲ့ရေဒီယိုတို့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုတောင်ကာကွယ်ခဲ့တယ်။ ငါကဒါကိုကြည့်ဖို့ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကလူကြီးဆက်ဆံရေးအတွက်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
လုလင်တို့သည်လည်း, သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်မိန်းကလေးများအဘယ်သို့ porn လုပ်နေတယ်ထွက်ရှာတွေ့မှ, ငါတို့အွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှတဆင့်ပွောဆိုကွလြှငျနှင့်အလေးအနက်ထားကြသည့်အခါစတင်နိုင်မညစ်ညမ်းနဲ့အလွန်အကျွံ, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြင့်ပျက်သောစပါးအများအပြားငယ်ရွယ်ဘဝတွေကိုရှိရှာဖွေတွေ့ရှိ 12 ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်အခြားသူတွေဆက်ဆံရေးလည်းကျိုးခဲ့အချို့သည်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူစာမေးပွဲကျရှုံး, ဒါမှမဟုတ် porn ကို အသုံးပြု. မှတစ်ဆင့်အလေးအနက်ကြွေးမြီသို့ရတယ်။
'' မိန်းမငယ်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့လိင်မှုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါ၊ ကြမ်းတမ်းရမ်းကားတဲ့လိင်အကြမ်းဖက်မှုအဆင့်တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။ ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေဖြင့်ပြုမူကျင့်ကြံနေသောယောက်ျားလေးများမှလိင်မှုကိစ္စများကိုယောက်ျားများမှထုတ်ယူသောကြောင့်၎င်းသည်ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။
ငါသိရန်တယ် 19 နှစ်အရွယ်လူကိုယူပါ။ သူကတစ်ဦးအလုပ်သင်လျှပ်စစ်အဖြစ်, ချောမောပီသသောနှင့်အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်၌ရှိ၏။ သို့သော်သူ၏အသက်သည်လည်း porn အလေ့အထကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
'ငါအချိန်ဖြုန်းတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုတယ်။ ဒါဟာအလွန်အမင်းပြင်းထန်တယ် ငါသုံးပတ်ကြာကြာဆက်ဆံရေးကိုကိုင်ထားလို့မရပါဘူး။ ငါဟာမိန်းကလေးအစစ်အမှန်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာဟာညစ်ညမ်းတာနဲ့မတူဘူး။ '
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောကလေးများကော်မရှင်နာအစီရင်ခံစာကဲ့သို့ပင် 'အခြေခံအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်နေရာတိုင်း၌ရှိသည်' ဟုသတ်မှတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြာမှန်သမျှသည်၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ဒေါက်တာ Valerie Voon, ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စွဲအပေါ်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်၎င်း၏မျိုး၏ပထမဆုံးလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အလေ့အထထိန်းချုပ်မှုထဲကခဲ့ကြပြီးအခြားသောအမှုအရာတို့တွင်အမာခံ porn watched အဖြစ်ဒေါက်တာ Voon သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ်ခဲ့ခံစားခဲ့ရသူကို 19 မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများကိုစုဆောင်း။
£ 50 မှတ်စုများနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားများကဲ့သို့သောလူအားလုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်လူသိများသည့်ဓာတ်ပုံများမှသည်အလွန်သာယာလှပသည့်ညစ်ညမ်းသောဗွီဒီယိုများနှင့်ဝတ်ဆင်ထားသောအဝတ်အစားများနှင့်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံများ၊
သူမသည် ventral striatum ဟုခေါ်သည့် ဦး နှောက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေသောနေရာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆေးစွဲသူတစ် ဦး သည်ဆေးစွဲမှုသို့မဟုတ်ဗော့ဒ်ကာပုလင်းလားကြည့်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏စွဲလမ်းမှု၏အမြင်အာရုံကိုပိုမိုမြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုကိုပြသနိုင်သည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ porn ပြသသည့်အခါပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအကျိုးကိုစင်တာအနိုင်နိုင်တုံ့ပြန်ဒါပေမယ့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော porn အသုံးပြုသူတစ်ဦးကခရစ္စမတ်သစ်ပင်နှင့်တူထ lit ။
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တူညီသည်။
စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအံ့အားသင့်ကြရသည်။ ဒေါက်တာ Voon ကပင်သူမအစကန ဦး လေ့လာမှုအပေါ်“ သံသယရှိပြီး ambivalent” ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
porn စွဲလမ်းဖြစ်ဖို့ Insidious အာဏာရှိသည်မလျှင်, ငါတို့သားသမီးအင်တာနက်ကနေတဆင့်လွတ်လပ်စွာကြောင့်လောင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အိမျတျောကိုလှည့်ပတ်မုသာစကားကိုဘိန်းဖြူထွက်ခွာ, ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတံခါးဗော့ဒ်ကာထွက်လိုက်တာနဲ့တူ၏။
အများဆုံးထိတ်လန့်သက်သေခံချက်ပါမောက္ခ Gail Dines မှလာ၏။ ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူမသည်ထောင်နှင့်ချီသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
သူမက“ မိန်းမပျိုတွေကိုသူတို့ရဲ့လိင်မှုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါ၊ ကြမ်းတမ်းရမ်းကားတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခဂျွန်အီးဂရန့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းလိင်စွဲလမ်းသူဒေါက်တာပလာလာခန်းနှင့်လီဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခမက်ဖီးလ်တို့ကဲ့သို့သောလိင်စွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စကားပြောခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းမှုကိုအထူးထိခိုက်လွယ်ကြောင်းသိရှိရသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ဆယ်ကျော်သက်များအချိန်တွင် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာကိုအပြည့်အဝတီထွင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်တွန်းမှုများကိုထိန်းညှိပေးသည့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက် cortex ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းအထိအပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဦး နှောက်သည် 'ရပ်တန့်' ရန်ပြောသောကြိုးများမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုလိုချင်သောကြိုးများဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ဒေးဗစ်ကင်မရွန် 2014 ၏အဆုံးအားဖြင့်လက်ရှိတွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အားလုံး 19 သန်းဗြိတိန်နေအိမ်များဝန်ဆောင်မှုပေးနေဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည် porn sites များပိတ်ဆို့ကြောင်းမိသားစုဖော်ရွေ filter များ switched ရပါမည်ဟုတ်မဟုတ်ပြောပါရမယ်ပြောပြသည်အခါမေးလ်ဇူလိုင်လအတွက်အောင်ပွဲပြောဆိုထားသည် သို့မဟုတ်ပိတ်။
ကျနော်တို့ porn နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများစကားပြောဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုပထမမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူရရှိရန်လိုအပ်နှင့်ခြေချောင်း-ရေခဲပြင်ဒိုးပစ်အဖြစ်ပုံရသည်အဖြစ်။
သူတို့ကိုပြောနေတာအသုံးပြုပုံသူတို့တစ်တွေအခွင့်အလမ်းရပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကသဲ၌အကြှနျုပျတို့၏ဦးခေါင်းကိုကပ်လျှင်, ငါတို့သည်သာကိုယျ့ကိုယျကိုထားပါသည်နေကြသည်။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော Channel 30 ၏ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Channel 10 မှ Channel4တွင်စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊